Rano sy sarintany. com - Geofumadas
Rano sy sarintany. fr
March, 2012 ArcGIS-ESRI, Cartografia, jeospatial - GIS
Esri Spain dia nanao fampielezan-kevitra mahaliana ho an'ny World Water Day, miaraka amin'ny fampahafantarana ny tranokala aguaymapas.com amin'ny gazetiboky izay trastocamos kely ato amin'ity lahatsoratra ity.
"Ny tamin'ilay fotoana World Water andro izany hatrany Esri Espaina no te-hampiseho ny fomba azon'ny fahamainana amin'ny volana vao haingana mahakasika ny rano no harena. Mila mahita ny zava-misy ara-tontolo iainana sy ny evolisiona, ary koa ny tsy fahampian'ny tahirin, ao amin'ny sarintany, dia afaka manampy ny olom-pirenena ho tonga mahafantatra ny toe-javatra iainantsika, ary mety handray fepetra momba ny fitantanana ny harena ity "
Diego Hidalgo, tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ao Esri Espaina.
Famantarana mahaliana miaraka amina antony iray izay tokony hahaliana antsika rehetra. Miaraka amin'ny teny filamatra 2012: Mangetaheta izao tontolo izao satria noana isika, taorian'ny ririnina maina indrindra 70 taona farany, aguaymapas.com manolotra manokana isan-karazany mba hampisehoana nivoatra ny toe-draharaha ankehitriny ao Espaina, mba hanampiana antsika ho lasa fantatry ny tena zava-misy sy ny tokony mitantana araka ny tokony ho sarintany.
Ny loharanom-baovao ampiasaina ny sarintany ny rano, aguaymapas.com avy bahoaka angona avy amin'ny panjakana misahana Toetr'andro, Hydrological Bulletin navoakan'ny Ministeran'ny Fambolena, Sakafo sy ny Tontolo Iainana sy Embalses.net.
Manome sehatra maro samihafa ny sarintany: Drano; Ririnina mafana; Rota tanteraka; Famakafakana ny fisakafoanana nandritra ny taona 70 farany;Espaina y Rano rano
Ao amin'ny sarintany no ahitantsika ny Drano, izay nodinihina ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny tahiry Espaniola.
Ny saritany dia misy ny fanasokajiana ireo fitahirizana arakaraka ny habetsaky ny rano izay tahirizin'izy ireo ankehitriny, ny fampitahana ny toe-javatra ankehitriny mikasika ny taona 2011 sy ny salan'isa azo tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary koa ny fampahalalana momba ny fahafahan'ny fitahirizan-drano.
Anisan'ireo angona azontsika alaina amin'ny sarintany, dia hitantsika fa amin'ny faritra mando matetika toa an'i Galicia, ny Tendrombohitra Cantabrian na ny Pyrenees Andrefana, dia ambany dia ambany ny tahirin-drano. Raha ao amin'ny fitahirizam-bokin'ny Extremadura na any amin'ny Lohasahan'i Guadalquivir, ny tahirin-drano dia 70% amin'ny fahaizany.
Ny angon-drakitra dia nalaina avy amin'ny Hydrological Bulletin navoakan'ny Ministeran'ny Fambolena, Sakafo sy ny tontolo iainana.
Ny fivoaran'ny toetr'andro amin'ny ririnina nandritra ireo roa ambin'ny folo taona farany
Ny sarintany dia ahitana ny fivoaran'ny rotsakorana nipoitra nandritra ny volana febroary teo anelanelan'ny taona 2000 sy 2012 miaraka amin'ny angona avy amin'ny Masoivohom-panjakana Meteorolojika.
Ao amin'ny sarintany dia afaka mahita ireto angon-drakitra manaraka ireto isika: ny oram-bolana nipoitra nandritra ny volana Febroary tamin'ny 2012 no ambany indrindra tamin'ny taona farany. Ao amin'ny faritra mampangatsiaka toa an'i Galicia na any amin'ny faritra avo be izay ahitana ny fisintahan'ny ranomandry (Pyrenees) amin'izao fotoana izao, dia tsy misy ny orana.
Ny sarintany dia mirakitra sary manjavozavo izay maneho amin'ny loko miandalana ny fizarana ny rotsakorana ao Espaina sy ny fivoarany ara-nofo.
Ny fivoaran'ny toe-javatra ankapobeny isan-taona avy amin'ny 1921
Ao amin'ny sarintany dia afaka mandinika ny fandalinana ny orana izahay nandritra ny taona voalohany amin'ny folo taona farany avy amin'ny 1921, miaraka amin'ny angona azo avy amin'ny Masoivoho State Meteorological.
Na dia mandroso aza ny firoboroboan'ny rotsak'orana, dia azo jerena toy ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny saikinosy ny fifandimbiasan'ny taona main-tany dia mihamitombo hatrany.
Ny sarintany incorporates ny raster sary izay manadihady ny fizarana ny rotsak'orana nandritra ny Espaniola jeografia tsikelikely amin'ny alalan'ny loko sy sary mampiavaka rotsakorana fandikana izay firaketana an-tsoratra ao amin'ny 10 vonjimaika nandinika dingana lehibe.
Fandinihana ny fisakafoanana any Espaina nandritra ny taona 70 farany
Ao amin'ny sarintany, dia afaka mandinika ny fandalinana ny fisakotan'ny toetr'andro any Espaina eo anelanelan'ny 1931 sy 2011. Izany dia ahafahana mahazo ny angon-drakitra momba ny fampihenana ny rano ao amin'ny tany sy ny fe-pahavoazana any amin'ny rivotra (fanoherana). Ny angona azo avy amin'ny masoivohom-panjakana Meteorological.
Ny angon-drakitra voaray dia mampiseho fa ankoatra ny fiarahamonina Autonomous any Galicia, dia mihalalaka kokoa ny soatoavin'ny haavonavona.
Eo am-pamakiana izany dia efa nihena ny habetsaky ny faritra misy haavon'ny haavon'ny lanitra, tato anatin'ny folo taona farany, manondro ny fizotry ny fanjanahana any amin'ny Saikinosy.
Ny karajia dia miankina amin'ny fifandraisana eo amin'ny fisotroan-dronono sy ny hafanana. Ny fomba ampiasaina hanisana azy dia ny endriky ny tendron'i Knoche (Ik): Ik = n * P / (100 * (T + 10)).
Firenena tafintohina ao Espaina
Ity sarintany informatika ity dia mampiseho tanàna sasantsasany ao Espana izay nanondraka ny rano noho ny fanamboarana toeram-ponenana na fitahirizana. Ny angona azo avy amin'ny Embalses.net.
Ho an'ity sari-tany ity dia nisy ny fampisehoana natao tamin'ny fampiasana ny ArcGIS Explorer Online, fampiharana fifanakalozan-kevitra mivoatra miaraka amin'ny Microsoft Silverlight.
Mihevitra izahay fa ny ezaka mahaliana dia ny fahitana ny zavatra azo atao amin'ny teknolojia manana propriétaires ary amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny olan'ny tombontsoa manerantany.
Mandehana any Aguaymapas.com
Previous Post«Previous Alefaso ny lisitry ny fandrindrana jeografika mankany amin'ny Google Earth, avy amin'ny Excel, miaraka amin'ny sary sy lahatsoratra manankarena
Next Post Ao ambadiky ny tananaomanaraka »